Loolan adag oo dhexmaraya labo musharax oo doonaya Jagadii Dhooba-Daareed & Wararkii u dambeeyey
GAROOWE(P-TIMES) – Loolanka ku wajahan cida noqonaysa Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa socota, waxaana si weyn isha loogu hayaa dhaqdhaqaaqyada ay siyaasaddu qeybta ka yihiin ee kasocda Garoowe, kuwaas oo u dhaxeeya Cabdirashiid Yuusuf Jibriil iyo Axmed Cali Dhahar oo labaduba kasoo jeeda gobalada Sanaag, Barri & Haylaan.
Loolanka ayaa sii adkaaday markii Abwaan oo horey si dhibyar iskugu caleema-saaray jagada guddoonka uu gadaal kasoo xoogeystay Musharax Cali Axmed Dhahar, waxaana uu wajahayaa culeys adag.
Sidaas oo kale, siyaasiin saameyn ku leh arrimaha gudaha Puntland ayaa faragalin ku sameeyey tartanka, waxaana dadku ay indhaha ku hayaan arrimaha baarlamaanka Puntland.
Baraha bulshada ayay labada musharax iskula soo wareegeen dacaayado ku saabsan loolankooda ayaa bilowday maanta, dad badan ayaana rumeysan in Abwaan iyo Cali Dhahar uu dhexmari doono tartan adag oo ay kala saari doonaan 64 xildhibaan ee kale.
Dadka dhaliilaya Abwaan ayaa ku eedeynaya in uu yahay nin eeganaya oo kaliya danihiisa gaarka ah oo aan waxba dan ah kagali doonin shaqada baarlamaanka ee la xisaabtamka Xukuumadda.
Musharaxa ay is hayaan ee Cali Dhahar, wuxuu maanta ku dhawaaqay in uu hogaamin doono baarlamaan la xisaabtama Xukuumadda, wuxuuna sheegay in uu garanayo waajibaadka laga sugayo Golaha Wakiilada Puntland.
Xukuumadda Puntland, ayaa saameyn ku leh loolanka, waxaana saaxiibada Madaxweynaha maamulkaas ay xooga saarayaan in uu soo baxo Cabdirashiid Yuusuf Jibriil, laakiin taas ayaa ah mid ay wali isku khilaafsan yihiin.
Madaxweynaha Puntland ayaa saameyn ku leh arrimahan, wuxuuna doonayaa in uu indhaha bulshada iska jeediyo, maadaama hadda balanqaadkiisii qodobkii 1aad uu dhaawac weyn gaaray oo ahayd in uusan faragalin ku sameyn doonin hay’adda baarlamaanka.
Ka sokow arrimaha socda, waxaan qarsooneyn dhaqdhaqaaq maaliyadeed oo qeyb ka noqonaya tartanka labada musharax, waxaana sidaas oo kale jira musharax ka madax banaan oo isna saameyntiisa leh.